Abenzi be-AP abasebenza eludongeni kunye nababoneleli - China Umgangatho ophezulu we-AP Factory
I-WL8200-WH2 yi-802.11ac wave 2 esekwe kwindawo yokufikelela kwindawo yokusebenza engenazingcingo (AP) exhasa iphaneli esemgangathweni engama-86 yofakelo olulula; ilungele ihotele, imfundo, urhulumente, kunye neenethiwekhi zeshishini. Iimpawu eziphambili kunye nokuqaqamba kokufikelela kwi-gigabit engenazingcingo kunye ne-WL8200-WH2 edityanisiweyo yamazibuko aphezulu e-gigabit, anokuhlangabezana ngokwenene neemfuno zebhendi yabathengi abangenazingcingo kunye namazibuko amane e-Ethernet amazibuko axhasa ubumbeko lwe-VLAN, ...
I-WL8200-WL2 802.11ac eludongeni lweDual Band Enterprise AP
I-WL8200-WL2 ngama-802.11ac asisiseko sendleko sokufikelela ngaphandle kwamacingo (AP) esikhutshwe yiDCN kushishino lokubuka iindwendwe kunye nemfundo. I-WL8200-WL2 ixhasa umgangatho we-802.11AC, i-bandwidth engenazingcingo ekhoyo ye-733Mbps. (I-2.4G band inokubonelela nge-300Mbps bandwidth kunye ne-5G band inokubonelela nge-bandwidth ye-433Mbps). Iimpawu eziphambili kunye nokuqaqamba ngokulula ukuhambisa i-WL8200-WL2 inokufakwa kwipaneli esemgangathweni engama-86, inokufakwa ngokukhawuleza ngokulungisa nje izikhonkwane ezimbini, ke ukufaka i-AP enye nje ...
DCWL-2000WAP (R2) 802.11n Ibhendi enye ebekwe eludongeni nge-AP
I-DCWL-2000WAP (R2) sisizukulwana esitsha esine-802.11n esekwe kwindawo ephezulu yokufikelela ngaphandle kweengcingo (AP) ekhutshelwe umzi wokubuka iindwendwe kunye nemfundo. I-DCWL-2000WAP (R2) ixhasa umgangatho we-802.11n, ibhendi enye ye-2.4G enokubonelela nge-bandwidth ye-300M. Inokufakwa kwipaneli esemgangathweni engama-86 ngaphandle kokwakhiwa kwakhona kodonga kwaye ubukhulu bayo yi-22mme kuphela. Iimpawu eziphambili kunye neeMpawu eziPhambili kulula ukuzisebenzisa - Ukufakwa ngokukhawuleza kwe-DCWL-2000WAP (R2) kunokufakwa kwipaneli esemgangathweni engama-86, ...